बिजुलीको झड्काले दुवै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्णलाइ यसरी लाग्यो करेन्ट, वास्तविकता बुज्दा सबैको मुटु काम्नेछ (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बिजुलीको झड्काले दुवै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्णलाइ यसरी लाग्यो करेन्ट, वास्तविकता बुज्दा सबैको मुटु काम्नेछ (भिडियो सहित)
admin January 9, 2019 भिडियो	0
झापा । रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का २१ वर्षीय कृष्ण ओली । मिजासिलो बोली, हँसिलो मुहार, खाइलाग्दो तन्नेरी जोवन, फूलजस्तै सुन्दर जीवन संगिनी । आमाले अर्कै रोजिन्, बाबाले घर छोडे । धेरै सपना साँचेका कृष्णले सानैमा ठूलै भारी बोके जिम्मेवारीका । ऋण सापट गरेर इलेक्ट्रिक सबइञ्जिनियर पढे । वर्ष दिनअघि काभ्रेकी रुपासँग लगनगाँठो कसे । जेठ २४ गते पहिलो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाए । आफ्ना साथीभाइ र परिवारका केही सदस्यलाई पनि बोलाए ।
गीतकै बारे थाहा नभएका दुर्गेश बारम्बार चिप्लिन्छन् किन? साँच्चै नेपाली दर्शकलाइ दुर्गेश ट्रेण्ड चाहिएकै हाे त?(भिडियो)